Nhau - Chii chinonzi Globe Valve Uye Inoitiswa Sei?
Globe mavharuvhu dzinomhanywa nemawhewheel uye zvakare dzinogadzirisa kutenderera kwemvura. Nekudaro, ivo zvakare vanogadzira yakakura kumanikidza kurasikirwa.
Kusarudza vharafu chaiyo kunodiwa, sezvo mhando dzakasiyana dzine mabasa akasiyana pamwe nekushandisa. Mamwe acho angori ne2 chete anoti: yakavhurika kana yakavharwa. Zvimwe zvinogonesa kutenderera kwemvura uye kumanikidza kuenzaniswa. Mavharuvhu akasarudzika anokonzeresa huwandu hwakasiyana hweshungu kurasikirwa. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, mamwe maficha anodikanwa.
Imwe yemhando dzakasarudzika dzemavharuvhu ivhu repasi. Muchikamu chino chipfupi, tinotsanangura mashandiro anoita mavhavha epasi rose, kusanganisira mabhenefiti uye kuderera.
Chii chinonzi globe vharafu, uyezve inoshanda sei?
Kuti usarudze kana vharafu repasi rose rakakodzera kunyorera kwako, funga nezvayo matatu epakati maficha. Pakutanga, mavhavha emabasa epadivi, ayo anoratidza kuti anovhura kana kuvhara kubva kumusoro-uye-pasi kufamba kwehunde. Chechipiri, ivo vanotendera, kurega, kana kudzikisira kutenderera kwemvura. Mamwe mavhavha anongovhura uyezve akavhara matunhu, asi mavhavha epasi anogona kudzipa kuyerera asina kuamisa zvachose. Chechitatu, zvinogadzira kurasikirwa kukuru kwemusoro kwakapesana nemamwe mavharuvhu, tradeoff yemasevhisi ekupwanya.
Mashandiro anoita mavhavha epasi rose
Kubva kunze, mavhavha epasi ane zvinhu zvitatu, mawoko echikwama, hood, nemuviri. Iyo bhoneti inodzika hunde, uyezve kana ruoko rwemaoko rwashandurwa, hunde inokwira kumusoro uye pasi mubhoneti. Kupera kwesinde kune chinhu chidiki chinonzi dhisiki kana chivhariso, icho chingave chesimbi kana chisiri chesimbi uye chinogona kuwanikwa nenzira dzakasiyana, zvichienderana nezvinodiwa.
Pakati pezvakanakira mavhavha epasi rose kugona kwavo kudzipa kana kudzora kuyerera. Kunze kwekuvharwa kana kuvhurika, vanogona zvakare kuvhurika. Izvi zvinokutendera iwe kuti uchinje kutenderera usinga regedze zvachose.
Iko kukuru kwekudzikira kwemavheji epasi rose ndiko kuenzanisa kwakakosha kurasikirwa kwemusoro kwavanokudziridza. Kurasikirwa nemusoro, kunodaidzwa zvakare kunetsekana kurasikirwa, kunoreva kuwanda kwekushomeka kwemvura zviitiko sezvo ichiyerera nepombi Kunyanya kuramba, kunyanya kunetseka kunorasika. Giravhiti, kukweshera (kwemvura maringe nemadziro epombi), uyezve kusagadzikana zvese zvinokonzeresa kurasikirwa uku. Mavharuvhu uye zvinokonzeresa zvinokonzeresa kumanikidza kurasikirwa kunyanya kuburikidza nekusagadzikana.
Globe mavharuvhu anomanikidza mvura kuti ishandure mirairo painofamba, ichigadzira kurasikirwa uye kusagadzikana. Iyo chaiyo huwandu hwekurasikirwa hunotsamira pazvinhu zvakaita semvura chiyero uye kukwiza kusiyanisa. Zvakangodaro, zvichiri kugoneka kuongorora kumanikidza kurasikirwa kubva pamavhavha akasiyana uchishandisa metric inonzi iyo L / D coefficient.
Nguva yekushandisa mavhavha epasi
Globe mavharuvhu akakwana chero iwe paunenge uchida kuenzanisa kuyerera, asi haufanire kunetseka pamusoro pehuwandu hwekushushikana kurasikirwa. Zvimwe zvinoshandiswa zvinosanganisira:
Mhepo inodzora masisitimu emvura
Mafuta emafuta masisitimu
Mvura yekupa mvura uye zvakare nemakemikari feed masisitimu
Jenereta ekuzodza mafuta masisitimu
Dhonza mapaipi uye zvakare cheka mashandisirwo mumoto wekusasa kana mamwe akasiyana emvura-based fire kuchengetedza masystem
Globe mavharuvhu haisiyo yakanyanya kunaka sarudzo yekudzora vharuvhu mumashandisi emoto, uko kumanikidza kunoenda kune yekutanga. Asi, shavishavi mavharuvhu anowanzoshandiswa.